Qaabka Kursiga Ciyaartoyga Jumladda 1501-3 Soo-saare iyo Alaab-qeybiye |Laba-qarxin
Midabka:Madow + Casaan + Cadaan
XUMBO CARUURTA QABOW: Xumbabada caaryada qabow ee gudaha ku jirta waxay kaa dhigaysaa mid aad u raaxo badan.
Intee in le'eg ayay tahay wakhtiga dhalmada?
20f awoodda weel ilaa 200 xabo.
Xidhmadaadu ma leedahay tijaabada hoos u dhaca dhererka?
Haa, xidhmadayadu waxay leedahay 60cm oo tijaabo ah oo dhicis ah.
Goorma ayaan heli karaa xigashada?
Caadi ahaan waxaanu ku soo qaadanaa 6 saacadood gudahooda kadib markaan helno su'aashaada.
Iyada oo leh nidaam tayo leh oo la isku halleyn karo, sumcad wanaagsan iyo adeeg macaamiil oo qumman, taxanaha alaabada ay soo saarto shirkadeena waxaa loo dhoofiyaa dalal iyo gobollo badan oo tayo wanaagsan Shiinaha Luxury Gamer Office Computer Chair PU Leather Gaming Kursiga Kursiga Kursiga Kursiga Swivel Kursiga oo leh Armrest, Our Enterprise Core. Mabda'a: Horta haybadda ;Dammaanadda caadiga ah ;Macaamiishu waa ugu sarreeya.
Tayo Wanaagsan Kursiga Ciyaaraha Shiinaha, Kursiga Ciyaaraha Raaxada, Shirkadeena waxay dhistay xiriir ganacsi oo xasiloon oo lala yeesho shirkado badan oo caan ah oo gudaha ah iyo sidoo kale macaamiisha dibadda.Iyada oo ujeedadu tahay in macaamiisha sariiraha hoose ku siino alaab tayo sare leh, waxaa naga go'an inaan horumarino awoodeeda cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo maamulka.Waanu ku sharafnay in aanu macaamiisheena ka helno aqoonsi.Shirkadaha "tayada badbaadada, kalsoonida horumarka" ujeedada, waxay si daacad ah u soo dhaweynayaan ganacsatada gudaha iyo kuwa shisheeye si ay u booqdaan si ay ugala hadlaan iskaashiga.
Hore: Qaabka Kursiga Ciyaaraha 1709-S
Xiga: Qaabka Kursiga Tartanka 1501-4